Sambo ပေမယ်သညျယရှေုကိုလက်ခံရရှိပြီလော | Apg29
1 029 online! | Sidvisningar idag: 169 693 | Igår: 156 273 |
Sambo ပေမယ်သညျယရှေုကိုလက်ခံရရှိပြီလော"ကျွန်မနေတဲ့ကြည်ကြည်ပြည်ထောင်စုတွင်နေထိုင်သော်လည်း, ယရှေုသညျခံရကြပြီ," တစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးဝေဖန်ရေးသားခဲ့သည်။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ဒီကော? သငျသညျမိတ်ဖက်များနှင့်နေဆဲသညျယရှေုခံရကြပြီအသက်ရှင်နိုင်သလော1. သင်သညျယရှေုကိုလက်ခံရရှိတဲ့အခါသင် cohabiting ကြသည်မှန်လျှင်သငျသညျသူသည်သင်တို့ကိုကူညီနှင့်အတူမှကြွလာမှန်တဲ့အခါသင်ဦးဆောင်ပါလိမ့်မယ်, သူ့ကိုအနီးယေရှုနဲ့ဘဝတွေကိုခံရကြပြီ။သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လည်းကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ရရှိနှင့်လက်ထပ်လိုက်ဖို့ဆိုရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်။2. သင်သညျယရှေုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်သင်တစ်ဦးမိတ်ဖက်ဖြစ်လာခဲ့သည် အကယ်.ထိုအခါသင်ကယ့်ကိုယရှေုသညျလက်ခံရရှိပြီကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လေရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။သငျသညျအထံတော်မှနောင်တရနှင့်သူ့ကိုရန်တာဝန်ပေးအပ်အသက်တာ၌အသက်ရှင်လျှင်သို့သော်ဤနေရာတွင်ယရှေုသညျသငျသညျကူညီပေးနိုင်သည်။3. သငျသညျအတူတူသားသမီးရှိသလားတစျဖနျ, ယရှေုကိုကူညီခြင်းနှင့်လက်ျာအရာအားလုံးကိုဦးဆောင်လမ်းပြရန်လိုသည်။ အဆိုပါအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုလုံးမိဘများသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရလိမ့်မည်ကြောင်းနှင့်အခြားလက်ထပ်။ သို့သော်တဦးတည်းကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်ချင်ပါဘူး, ဒါမှမဟုတ်အခြားသို့ရာတွင်နီးစပ်ယေရှုအားအသက်ရှင်ဖို့ဆက်လက်ရကြလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်နဲ့လက်ထပ်ဖို့မလိုကြပါလျှင်။ ထိုအခါကအရာနှစ်ခုရှိနိုင်ပါသည်: အဆိုပါဒုတိယမိတ်ဖက်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် "ကူးစက်" နှင့်လည်းသူတို့ကလက်ထပ်ရန်အကြောင်း, ဒါကြောင့်သူ / သူမဖက်အရွက်နိုင်အောင်အမျက်ထွက်ofrälsteဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အတွက်ရလဒ်များဒါကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်ချင်ကြလိမ့်မည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့အရေးပါတဲ့အရာသငျသညျလက်ထပ်ရန်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရကြပါဘူး။ သငျသညျယရှေုကိုကိုလက်မခံတဲ့အခါသင်ဖြစ်လာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။ သို့သော်အခါ, တစ်သိမ်းဆည်းဖြောင့်မတ်ဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေမှုကြောင့်စေလိုသည်။ တစျခုမှာအချင်းချင်းပြီးတော့အိမ်ထောင်သည်တစ်ဘုံယောက္ခမလက်ထပ်ထိမ်းမြားသည်အဖြစ်ဘုရားသခင်, အပြစ်, မတရားသောမေထုန်ကိုနှင့်အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ဆန့်ကျင်ပုန်ကန်မှုတှငျနထေိုငျကွပါဘူး။